လိုကျလြောညီထှေ နထေိုငျခွငျး (Adapt Change)
လိုကျလြောညီထှနေထေိုငျခွငျး (Adapt Change) ဆိုတာ ဘယျလိုနထေိုငျတာမြိုးလဲ၊ ဘယျလိုနထေိုငျသငျ့လဲ၊ ဘာကောငျးကြိုး တှေ ရရှိနိုငျလဲ၊ အခွားမညျသညျ့အကြိုးတှေ ဖွဈနိုငျသလဲ ……
လူတဈကိုယျ စိတျတဈမြိုးဆိုသလို လူတယောကျနဲ့ တယောကျမတူသလို အကွိုကျခွငျး၊ စရိုကျခွငျး၊ အနအေထိုငျ၊ အပွောအဆိုဆကျဆံပုံခွငျး အရာတျော တျောမြားမြားကှဲပွားကွပါတယျ။ သို့သျော ကိုယျ့ပုံစံနဲ့ပဲကိုယျနမေယျ မပွောငျးလဲနိုငျ ဘူးဆိုသူတှဟော နရောဒသေတခုခုမှာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ လုပျငနျးပတျဝနျးကငျြ အသဈတခုရောကျသှားတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ခရီးသှားလာတဲ့အခြိနျမှာပဲဖွဈဖွဈ အတျောလေး အဆငျ မပွဖွေဈကွရပါတယျ။
ရောမရောကျရငျ၊ ရောမလိုကငျြ့ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားရှိသလိုပါပဲ၊ မိမိရောကျရှိ နတေဲ့နရောအပျေါမှာ အသငျ့တျောဆုံးနဲ့ အကောငျးဆုံးပွုမူ နထေိုငျသငျ့ပါတယျ။ ကြှနျတျော/ကြှနျမကတော့ လှတျလှတျလပျလပျပဲ နတေတျတယျ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ပွတေတျတာပါ၊ အဲ့နရောကိုမကွိုကျဘူး၊ အဲ့လို တော့မလုပျခငျြဘူး၊ စသညျဖွငျ့ ဆငျခွမြေိုးစုံ ပေးပွီး ပွောငျးလဲဖို့ငွငျးဆနျတတျကွပါတယျ။ မိမိအိမျမှာ ဒါမှမဟုတျ သူငယျခငျြး တှကွေားထဲမှာ ဘယျလိုပုံစံမြိုးပဲ နခေဲ့သျောငွားလညျး၊ ပတျဝနျးကငျြအသဈတခုရောကျသှားခဲ့ရငျ အမြားကို သတိထားသငျ့ပါတယျ။ အခြို့သော နထေိုငျမှုပုံစံ (Type) တှကေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလညျး အနအေထိုငျခကျခဲ စသေလို တပါးသူအတှကျလညျး အနှောငျ့အယှကျဖွဈစပေါတယျ။ ထို့အပွငျ မိမိအပျေါတှငျသာမက မိမိနှငျ့သကျဆိုငျတဲ့ အဖှဲ့အစညျး၊ လုပျငနျးအပေါငျးအသငျးပျေါကိုပါ သကျရောကျတတျပါတယျ။
လိုကျလြောညီထှနေထေိုငျတာနဲ့ အလိုကျအထိုကျနထေိုငျတာ အတူတူပဲလား သာမနျအားဖွငျ့ တူညီပမေဲ့ တကယျတမျ တော့ ကှဲပွားပါသေးတယျ။ လိုကျလြောညီ ထှနေထေိုငျတယျဆိုတာ (Adapt Change) အမြားက နားလညျလကျခံပေး အောငျနထေိုငျတာ၊ အလိုကျအထိုကျနထေိုငျတယျဆိုတာက (Follow the crowd) တပါးသူဖွဈ စခေငျြတာကို လိုကျလုပျတာမြိုးပါ။ လိုကျလြောညီထှေ နထေိုငျတယျဆိုတာ လူအမြား နဲ့ကိုကျညီအောငျ ပွုပွငျနထေိုငျတာမြိုး ဖွဈပွီး၊ အလိုကျအထိုကျနတေယျဆိုတာ တဦးခငျြးဆီရဲ့ စရိုကျနဲ့ကိုကျညီအောငျ ပွောငျးလဲနထေိုငျတာမြိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ တခါတခါ ၂ မြိုးစလုံးလိုအပျပမေဲ့ အမွဲတမျး တော့ မလိုအပျဘူးလို့ ထငျပါတယျ။
ဒီအပိုငျးမှာတော့ နညျးနညျးပွော စရာရှိပါတယျ။ ပွောငျးလဲမှုမလုပျခငျ အရငျ ဆုံး သငျ့ကိုယျသငျ ဆနျးစဈပါ။ ငါဒီလိုနတော ဘာအတှကျလဲ၊ ဘယျသူ့အတှကျလဲ၊ မဖွဈ မနေ ပွောငျးလဲနထေိုငျသငျ့တာလား၊ ငါကော အဲ့လိုပွောငျးလဲရငျ ပြျောနိုငျပါ့မလား၊ ငါ့ရဲ့တကယျ့ ဘဝနဲ့ကိုကျညီပါ့မလား ဆို တာပါပဲ။ Positive Change နဲ့ Negative Change ဆိုပွီး ၂ မြိုးခှဲလိုကျပါ။ ကိုယျ့ အတှကျ မကောငျးတဲ့ဆိုးကြိုးတှေ သကျ ရောကျစမေယျ့အရာကို အတတျနိုငျဆုံး ထိနျးခြုပျပွောငျးလဲပါ။ ပွောငျးလဲမှုတိုငျးကို ဆနျးစဈပါ။ အဖှဲ့အစညျးတခု သို့မဟုတျ ပတျဝနျးကငျြအသဈတဈခုမှာ လိုကျလြောညီ ထှနေထေိုငျတတျခွငျးက သငျ့ကို အမြားကွီး အထောကျအကူပွုစပေါတယျ။ သငျယူရလှယျကူမယျ၊ ကူညီအားပေးမှုရမယျ၊ အတားအဆီးအဟနျ့အတားတှနေညျးလာမယျ၊ အသဈအဆနျးတှေ လှယျကူလငျြမွနျစှာ လလေ့ာလို့ရမယျ၊ တသီးတသနျ့ဖွဈမနတေဲ့ အတှကျ လူအမြားရဲ့ ခဈြခငျနှဈသကျမှုကိုရ မယျ၊ ဒါ့အပွငျ တယောကျနဲ့တယောကျ ယုံ ကွညျမှုနဲ့ ရိုငျးပငျးမှုတှပေိုမိုဖွဈပျေါလာပါမယျ။
ငါက အကွီးပဲ ငါပွောငျးလဲစရာမလိုပါဘူးဆိုတာမြိုးရှိလာရငျကော ...?
ကြှနျတျောတို့ ဒီလိုအရာမြိုးကို ကွုံဖူးကွမယျထငျပါတယျ။ ယနခေ့တျေကွီးက အလှနျလငျြမွနျစှာ ပွောငျးလဲနပေါတယျ။ ကိုယျမပွောငျးလဲနိုငျဘူးဆို ကနျြနခေဲ့မယျ့သူက ကိုယျတိုငျပဲဖွဈနမှောပါ။ ဒီလိုအဖွဈအပကျြသာဓက မြားစှာလညျးရှိပါတယျ။ မိမိမပွောငျးလဲနိုငျရငျ ပွောငျးလဲနိုငျသူကအသာစီးရသှားမှာ မလှဲပါပဲ။ ယခငျကဓါတျပုံတှေ ဖလငျနဲ့ရိုကျတယျ၊ ယနခေ့တျေရောကျတော့ ဒီဂဈြတယျ (Digital) ခတျေကွီးဖွဈသှားတယျ။ အပွောငျးအလဲ အရမျးမွနျပါတယျ။ ထို့အပွငျ အဖှဲ့အစညျးစိတျဓါတျဖွငျ့ အလုပျလုပျရတဲ့ Team Working ဆိုတဲ့ အရာမှာ အလှနျပငျ အားနညျးသှားနိုငျပါတယျ။
ယခုကဲ့သို့ တိုးတကျနသေော ခတျေ ကွီးမှာ တိုးတကျမှုမြားကို လလေ့ာဆနျးစဈရငျး မိမိကိုယျကို ရကေဲ့သို့ အလားသဏ်ဍာနျ ယူပွီးနထေိုငျသငျ့ပါတယျ။ ရဆေိုတာအဝိုငျးထဲရောကျရငျအဝိုငျးပုံ၊ လေးထောငျ့ထဲ ရောကျရငျ လေးထောငျ့၊ မာကွောသော ကြောကျဆောငျမြားအကွားမှာလညျး ရရှိတဲ့ နရောလေးကို အကောငျးဆုံးပုံဖျောနထေိုငျသှားနိုငျပါတယျ။ ထိုကဲ့သို့ ဥပမာပွု၍ ကောငျးမှနျသော လိုကျလြောညီထှပွေောငျး လဲနထေိုငျမှုမြားကို ပွောငျးလဲနထေိုငျသငျ့ပါကွောငျး အကွံပေးတငျပွလိုပါတယျ။
လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်ခြင်း (Adapt Change)
လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်ခြင်း (Adapt Change) ဆိုတာ ဘယ်လိုနေထိုင်တာမျိုးလဲ၊ ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်လဲ၊ ဘာကောင်းကျိုး တွေ ရရှိနိုင်လဲ၊ အခြားမည်သည့်အကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ ……
လူတစ်ကိုယ် စိတ်တစ်မျိုးဆိုသလို လူတယောက်နဲ့ တယောက်မတူသလို အကြိုက်ခြင်း၊ စရိုက်ခြင်း၊ အနေအထိုင်၊ အပြောအဆိုဆက်ဆံပုံခြင်း အရာတော် တော်များများကွဲပြားကြပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ပဲကိုယ်နေမယ် မပြောင်းလဲနိုင် ဘူးဆိုသူတွေဟာ နေရာဒေသတခုခုမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင် အသစ်တခုရောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားလာတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အတော်လေး အဆင် မပြေဖြစ်ကြရပါတယ်။
ရောမရာက်ရင်၊ ရောမလိုကျင့်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားရှိသလိုပါပဲ၊ မိမိရောက်ရှိ နေတဲ့နေရာအပေါ်မှာ အသင့်တော်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးပြုမူ နေထိုင်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်/ကျွန်မကတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ နေတတ်တယ်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ပြေတတ်တာပါ၊ အဲ့နေရာကိုမကြိုက်ဘူး၊ အဲ့လို တော့မလုပ်ချင်ဘူး၊ စသည်ဖြင့် ဆင်ခြေမျိုးစုံ ပေးပြီး ပြောင်းလဲဖို့ငြင်းဆန်တတ်ကြပါတယ်။ မိမိအိမ်မှာ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်း တွေကြားထဲမှာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲ နေခဲ့သော်ငြားလည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တခုရောက်သွားခဲ့ရင် အများကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ အချို့သော နေထိုင်မှုပုံစံ (Type) တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အနေအထိုင်ခက်ခဲ စေသလို တပါးသူအတွက်လည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ထို့အပြင် မိမိအပေါ်တွင်သာမက မိမိနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းအပေါင်းအသင်းပေါ်ကိုပါ သက်ရောက်တတ်ပါတယ်။
လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်တာနဲ့ အလိုက်အထိုက်နေထိုင်တာ အတူတူပဲလား သာမန်အားဖြင့် တူညီပေမဲ့ တကယ်တမ် တော့ ကွဲပြားပါသေးတယ်။ လိုက်လျောညီ ထွေနေထိုင်တယ်ဆိုတာ (Adapt Change) အများက နားလည်လက်ခံပေး အောင်နေထိုင်တာ၊ အလိုက်အထိုက်နေထိုင်တယ်ဆိုတာက (Follow the crowd) တပါးသူဖြစ် စေချင်တာကို လိုက်လုပ်တာမျိုးပါ။ လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်တယ်ဆိုတာ လူအများ နဲ့ကိုက်ညီအောင် ပြုပြင်နေထိုင်တာမျိုး ဖြစ်ပြီး၊ အလိုက်အထိုက်နေတယ်ဆိုတာ တဦးချင်းဆီရဲ့ စရိုက်နဲ့ကိုက်ညီအောင် ပြောင်းလဲနေထိုင်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ တခါတခါ ၂ မျိုးစလုံးလိုအပ်ပေမဲ့ အမြဲတမ်း တော့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီအပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်းပြော စရာရှိပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ခင် အရင် ဆုံး သင့်ကိုယ်သင် ဆန်းစစ်ပါ။ ငါဒီလိုနေတာ ဘာအတွက်လဲ၊ ဘယ်သူ့အတွက်လဲ၊ မဖြစ် မနေ ပြောင်းလဲနေထိုင်သင့်တာလား၊ ငါကော အဲ့လိုပြောင်းလဲရင် ပျော်နိုင်ပါ့မလား၊ ငါ့ရဲ့တကယ့် ဘ၀နဲ့ကိုက်ညီပါ့မလား ဆို တာပါပဲ။ Positive Change နဲ့ Negative Change ဆိုပြီး ၂ မျိုးခွဲလိုက်ပါ။ ကိုယ့် အတွက် မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေ သက် ရောက်စေမယ့်အရာကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲပါ။ ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကို ဆန်းစစ်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းတခု သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခုမှာ လိုက်လျောညီ ထွေနေထိုင်တတ်ခြင်းက သင့်ကို အများကြီး အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။ သင်ယူရလွယ်ကူမယ်၊ ကူညီအားပေးမှုရမယ်၊ အတားအဆီးအဟန့်အတားတွေနည်းလာမယ်၊ အသစ်အဆန်းတွေ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ လေ့လာလို့ရမယ်၊ တသီးတသန့်ဖြစ်မနေတဲ့ အတွက် လူအများရဲ့ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုရ မယ်၊ ဒါ့အပြင် တယောက်နဲ့တယောက် ယုံ ကြည်မှုနဲ့ ရိုင်းပင်းမှုတွေပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်။
ငါက အကြီးပဲ ငါပြောင်းလဲစရာမလိုပါဘူးဆိုတာမျိုးရှိလာရင်ကော ...?
ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုအရာမျိုးကို ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ကြီးက အလွန်လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ကိုယ်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆို ကျန်နေခဲ့မယ့်သူက ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်သာဓက များစွာလည်းရှိပါတယ်။ မိမိမပြောင်းလဲနိုင်ရင် ပြောင်းလဲနိုင်သူကအသာစီးရသွားမှာ မလွဲပါပဲ။ ယခင်ကဓါတ်ပုံတွေ ဖလင်နဲ့ရိုက်တယ်၊ ယနေ့ခေတ်ရောက်တော့ ဒီဂျစ်တယ် (Digital) ခေတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ အပြောင်းအလဲ အရမ်းမြန်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓါတ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ Team Working ဆိုတဲ့ အရာမှာ အလွန်ပင် အားနည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ယခုကဲ့သို့ တိုးတက်နေသော ခေတ် ကြီးမှာ တိုးတက်မှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရင်း မိမိကိုယ်ကို ရေကဲ့သို့ အလားသဏ္ဍာန် ယူပြီးနေထိုင်သင့်ပါတယ်။ ရေဆိုတာအ၀ိုင်းထဲရောက်ရင်အ၀ိုင်းပုံ၊ လေးထောင့်ထဲ ရောက်ရင် လေးထောင့်၊ မာကြောသော ကျောက်ဆောင်များအကြားမှာလည်း ရရှိတဲ့ နေရာလေးကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်နေထိုင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ဥပမာပြု၍ ကောင်းမွန်သော လိုက်လျောညီထွေပြောင်း လဲနေထိုင်မှုများကို ပြောင်းလဲနေထိုင်သင့်ပါကြောင်း အကြံပေးတင်ပြလိုပါတယ်။
Read times Last modified on Monday, 27 April 2020 15:10